यहि सिलसिला जारी रहे, अरुले त के, शेषनागले पनि बागलुङ नगरपालिकाको कर्तूत वर्णन गर्न सक्तैनन् ! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण ७, सोमबार १६:१३	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ साउन ७ । स्थानीय तहको नयाँ पुनसंरचना अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष भन्दा बढी भएको छ । आफुले मत दिएर चुनेका जनप्रतिनिधीहरुले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर मतदाताहरुले हर समय चासो लिईरहेका हुन्छन् । एक घण्टा पहिले कै कुरा गरौँ एक जना नगरवासीले सडकमै फोहेर फ्याँकिएको एक तस्वीरलाई आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेर जिज्ञासा राखेका छन् होइन यो नगर पालिका को कार्य छेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैनन् ? पबित्र नदिको आसपास,यात्री हिड्ने सार्बजनिक बाटोमा यस्तो कार्य गर्न कसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो ?’ नागरिक जान्न चाहान्छन अहिलेको अवस्थामा कुनै अनलाईन समाचार वा प्रिन्ट मिडिया वा रेडियो मात्र सन्चारमाध्यम रहेनन् जो,जससंग मोबाईल छ उनिहरु सबै पत्रकार हुन् जस्तो तलको तस्बीर र जिज्ञासाले बताई रहेछ ।
आम सन्चार माध्यमहरुले यस्तै नागरिकका गुनासा, उनिहरुलाई परेको दु:ख पीडा र जनजिब्रोबाट निस्केका सुस्केरा,चर्चा परिचर्चालाई लिएर सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट गर्न समाचार सम्प्रेषण गर्छन । समाजमा भैरहेका घटनाहरु, पदासीनहरुबाट भएका र हुनसक्ने सम्भावित गलत कार्यहरुलाई दुरुत्साहित गर्नपनि समाचार सम्प्रेषण गर्नु सन्चार माध्यमको कर्तव्य हुन्छ । कसैको कोरा स्तुतिगान गाउनु मात्र पत्रकारिता हुँदैन र पदासीनहरुले पत्रकारहरुबाट यस्तो आशा राख्नु पनि हुँदैन ।
पदीय मर्यादालाई मनन गरी जनहितका काममा दत्तचित्त रहेर नि:स्वार्थभावले निष्पक्षरुपमा आफ्नो कर्तव्यपालन गरेमा कोहि हल्लिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन । कानूनलाई हातमा लिएर मौकाको फाईदा लुट्ने मनसुवाले काम भए गरिएमा निश्चित छ, यस्ले नभए उस्ले, उस्ले नभए यस्ल,े उस्ले नि नभए फेसबुकले पिछा गर्छ छोड्दैन ।
गल्ती नगर्ने जनप्रतिनिधी डराउदैनन्, निर्धक्क सबैसंग चर्चा परिचर्चा गरी सुझाव लिन्छन र जनताका हितमा काम गर्छन् । सके हप्तै पिच्छे नभए महिनामा एक पटक त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेर प्रतिपादित कामहरुबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिएका हुन्छन् । कसैले वदनियत राखेर गलत समाचार सम्प्रेषण गर्छ भने ढटेर मुकाबला गर्न सकिन्छ । सप्रमाण त्यस्को प्रतिकार गर्न सकिन्छ । जव लालची मनले कुलषित भावना लिएर काम गरिन्छ, सार्वजनिकरुपमा कसैका सामु उभिन पनि सकिन्न । ठाडो शिरले कसैसंग बोल्न त के आँखा जुधाउन नि सकिन्न ।
लिखितममा केहि भन्न नसक्ने बकितममा उ फलनाकै पालादेखी कम्युनिष्ट बिरोधी व्यक्ति हो भनेर जुँगा मुसार्ने छुचुन्द्राहरुबाट वर्तमान डराउने प्रश्न आउदैन ।
पदीयदायित्वलाई मर्लक्कै बिर्सिएर मौका यहि हो भन्ने कमिना मानसिकताले काम गर्ने, पदकोध्वाँसले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने, आसेपासेहरुलाई पोस्ने, रोँचैका रोँचे डिजेल पेट्रोल पनि पिउने गरेपछी ढिलोचाँडो अपच हुन्छ नै । दुर्गन्ध बाहिर आउछ नै । अनि जनताहरुले छि:छि: त भन्ने नै भए । मान्छेको हैसियत यस्तै गलत कार्यहरुबाट जगजाहेर हुन्छ । अनि गर्दागर्दा कस्ता दहिच्यूरे साँहिलालाई चुनिएछ भन्ने आत्मग्लानिको अनुभूति मतदाताहरुलाई हुन्छ ।
पछिल्लो समय सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिका चर्चाको शिखरमा छ । एक वर्ष तीन महिना सम्म एकचोटी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको छैन । सार्वजनिक सुनुवाई गर्न किन डराईरहेछ नगरपालिका ? सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेर नगरबासीसंग रुबरु हुन किन डराउछन जनप्रतिनिधहरु ? नगरबासीहरुलाई एक हिन्दी कहावतको स्मरण भैरहेको छ: दालमे कुछ काला है ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले नगरपालिका गन्हायो पनि । समाचारकै कारण एक हार्डवयर दुकानको नक्कली बिलबाट करीब चारलाख रुपयाँको बिल, भुक्तानी हुनबाट रोकिन पुग्यो ।
ईबागलुङमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर बागलुङ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नामबाट प्रकाशित प्रेस बिज्ञप्ती र त्यसको भोलि पल्ट नगर प्रमुख र उपप्रमुखको नामबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तीमा नक्कली बिलबारे चूँ सम्म उल्लेख नगर्नुले स्वभाविकरुपमा नगरवासीलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । सिमेन्ट पाईप जालीमा गलत भए जानकारी गराउन भन्ने नगरपालिका, बिल बारै मौनब्रत किन ?
बेलामौकामा नगरपालिकाले बलेवामा विमान सेवा सन्चालन र बसपार्क निर्माणलाई लिएर गुड्डी हाँक्ने गदै आएको छ । यतिसम्मकि धौलागिरी अन्चलको प्रतिष्ठासंग जोडेर अहिले सम्मकै महान उपलव्धी बताई रहेको छ ।
प्रथमत: वर्तमानमा अन्चल भन्ने नै छैन । अर्को कुरा मुस्ताङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लाका कति यात्रुहरुले हालसम्म बलेवाबाट काठमाडौ र काठमाडौ बाट बलेवा उडान भरे ? हाल सम्म कति उडान भए र के कति यात्रुहरुले उडान भरे या के कति नगरपालिकाले क्षतीपूर्ति भर्न पयो ? त्यस्को विवरण होलानि नगरपालिका संग ? बारम्बार नगरवासीले आवज उठाउदा पनि किन त्यस्को विवरण सार्वजनिक गर्न सक्तैन नगरपालिका ? नगरबासीले तिरेको राजश्व विमान कम्पनिलाई खुवाउने भ्रष्ट प्रबृत्तिले नगरपालिकामा प्रवेश पाएकोमा चिन्तित छन् नगरबासी । यसको जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भैरहेको छ । आँखामा कालो चश्मा लगाएर कानमा ठेँड्को कोचेर बसेको छ र नगरपालिका ? नभए किन बास्तविकता सार्वजनिक गर्न डराई रहेको छ । एक उडानमा यात्रुको अभावले गर्दा रु १ लाख भन्दा बढी नगरपालिकाले क्षती भरिहेको छ, के यहि हो उपलव्धी ?
अर्कोतिर उपल्लाचौरमा निर्माण भैरहेको बसपार्कलाई आफ्नो उपलव्धी भनेर गिनाउन अघिसर्नेले, नगरपालिका मै छ माईन्यूट बुक (निर्णय पुस्तिका)युक्तजीसंग मागेर हेरे छर्लंग हुन्छ, कुन नगरप्रमुखको कार्यकालमा उपल्लाचौरमा बसपार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएर कार्य थालनी भएको हो ?
व्यक्तिगत गालीगलौच गरेर पानीमाथीको ओवानो बन्न खोज्नु भन्दा कसरी नगरवासीको हितमा कार्य गररे हाईहाई हुने भन्नेतिर सोच्नु राम्रो हुन्छ । कति राम्रा राम्रा गन्यमान्यजनलाई बागलुङका नगरबासीले आफ्नो प्रतिनिधी चुनेछन् भन्ने बासना चारैतिर फैलाऔँ । अझै चारवर्ष बाँकी छ, सुध्रियौँ । जनताको विश्वासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पदीय दायित्वलाई निर्बाह गरी काम गरे सानातिना कुराबाट मानसिक सन्तुलन नै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउदैन । गलत मनसुवा राखेर काम गर्न खोज्ने हो भनै घण्टामा एकजना कार्यकारी अधिकृत फेरेपनि ‘उल्लु’ पूरा गर्न असम्भव हुन्छ ।
बैठक कोठाबाट जोडिएको भान्छा कोठामा जाँदापनि गाडी चढ्ने ईच्छा व्यक्त गर्नेहो भने देख्नेले कस्तो बहुला होला ? नपाउनेले केरा पायो बौक्रासँगै खायो भन्छन । त्यसैले सबै कुराको सहि प्रयोग गरौँ । नगरबासीको सम्मान गर्न सिकौँ । सबै मै हुँ भन्ने अहं भावनाले घोप्टो मुख नपरिएला भन्न सकिदैन ।
नगरपालिकाको विभिन्न विकास शिर्षकमा मौज्दात रहेको रकमबाट ८० लाख रुपयाँको गाडी किनेर चढ्दैमा महान प्रमुख भईएला र ? कर्मचारीमाथी छानबिन सुरु गर्छु भनेर थर्काउदैमा आफ्ना गलत कृयाकलाप लुक्न सक्लान र ? कति दिन चूप लागेर बस्ने ? सार्वजनिक भएर आफुले भएगरेका सम्पूर्ण विवरण जस्तातस्तै नगरबासी समक्ष राख्न सक्नु पर्छ । कोठामा कसैको व्यक्तिगत अनावश्यक चियोचर्चा गर्दैमा अपराधबाट मुक्ति पाउन सकिन्न ।
बिगत एकवर्षको कार्यकालमा भए गरिएका र नगरवासीबाट निस्किएका गुनासालाई मध्यनजर गरेर भन्ने हो भने नगरपालिकाको कर्तूतहरु वर्णन गर्न ईबागलुङ त के शेष नागले पनि सक्ने छैनन् ।
कुरो कीर्ते बिलको छ, यसरी व्यक्तिगत गाली गलौच गरेर अपराधबाट उम्कन सकिन्छ ? सुनौँ पत्रकार सम्मेलनमा मेयर साबको मुखबाट निस्केको गाली/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नगर प्रमुख र उपप्रमुख बाट प्रकाशित विज्ञप्ती ।
नगरपालिकामा करोडौँको चलखेल ! ज्यालादीरीको हालीमुहालीले कर्मचारी यन्त्र तहस नहस !
गुल्मी शान्तिपुरमा ७० वर्षिया बृद्धाले यौन सम्पर्क राख्न नमानेपछि मुक्का प्रहार गरी हत्या !